ကဏ္ဍစုံ ပြခန်း: ဟိုင်းလပ်များ၏ရင်ခုန်သံ
ညချစ်သူ | 11:29 PM | ဆောင်းပါး
ညချစ်သူ | 11:29 PM |
ဒီ ပို့ စ်လေးကို မေးလ်ထဲကတဆင့်ရလို့မသိသေးတဲ့ သူများ နဲ့မသိချင်ယောင်
ဆောင်နေ သူများအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး တင်ပြလိုက်ရပါသည်.။ ဘာလို့ လဲ ဆိုတော့ 
ပြောသာပြောရမှာ ကိုယ့်ပေါင် ကိုယ်လှန်ထောင်းဖြစ်နေပြီ..ဟီး.. ။သူငယ်ချင်း
တွေထဲမှာ ဟိုင်းပြီးလပ် နေသော သူများရော၊ ဟိုင်းပြီး လိုချင်နေတဲ့ သူများရော၊
တချို့ ကျတော့မာနလေးနဲ့ ဗျ.. ဟိုင်းချင်သလောက်ဟိုင်း အချိန်တန်ရင် အမေ
ရှာပေးလိမ့် မယ်ဆိုပြီး.. ဆက်ဟိုင်းတွေလဲ ရှိသေး..။ ( ဟိုင်းလပ်၊ ဟိုင်းလို၊ ဆက်ဟိုင်း )
လောလော ဆယ်တော့ဒီပို့ စ်လေမှာ တော့ဟိုင်းလပ်အကြောင်းပဲ ရေးထားပါတယ်။
ရှုစားတော်မူကြပါ။( Heart ထိသွားရင်တော့ဆော်ပလော်တီး...အဲ..ယောင်လို့ဆောရီးကိုကို)
ဟိုင်းလပ်များဆိုလို့ ကားအကြောင်းဟုထင်လျှင်မှားမည်။ လူအကြောင်းဖြစ်သည်။
လူအကြောင်းမှ အသက်အရွယ်အရ၊ အနေအထားအရ အချိန်တန်နေပေမယ့်
ရင်ခုန်သံဖြည့်ဘက် နေရာမှာလစ်လပ်နေသေးတဲ့ လူပျို(ကြီး)၊ အပျို(ကြီး)
တွေအကြောင်းဟုဆိုလျှင် ပို၍တိကျပေမည်။ အသက် ၃၀ တန်းတွေဆိုတော့
၊ ဝါးနီးပွိုင့် (warning point)
ကိုရောက်နေပြီဆိုတာကိုတော့ လက်ခံရပေတော့မည်။ အရွယ်လွန်တာမဟုတ်တော့ အရွယ်
ဟိုင်း တာဟုဆိုနိုင်သည်။ အခုလို ဟိုင်း လာတဲ့ အရွယ်မှာ ရင်ခုန်သံတစ်ခြမ်း
လစ်လပ် နေသေးတဲ့သူတွေမို့ ဟိုင်းလပ် များဟု
နယူတန့်ရဲ သိပ္ပံအမြင်နဲ့ပဲ ကြည့်ကြည့်၊ ဘုရားဟော နဲ့ပဲ ညှိညှိ၊
အကြောင်းတရားမရှိပဲ အကျိုးတရားမရှိ။ ထိုနည်းတူစွာပင် ဟိုင်းလပ်တို့မှာလဲ
အကြောင်းအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်သော်လည်း၊ အခြေခံအားဖြင့်တော့ ၃
ကောင်းစွာမရှင်သန်ပဲ ပမာဏနည်းနေတတ်သည်။ သူတို့မှာ တစ်ကယ်တန်း commit
လုပ်ရမယ့် အရေးကြတော့ တွန့်သွားတတ်ကြသည်။ ဒီတော့
ဟိုင်းလပ်များဘဝရောက်လာကြသည်။ ဒါကို အရပ်စကားနဲ့တော့ အရွေးလွန်တာ
ဒုတိယတစ်မျိုးကျတော့ အင်မတန်ချစ်သည်၊ အလွန်ချစ်သည်။ နူးညံ့ ထိရှလွယ်စွာ
ပြင်းပြင်းထန်ထန်ချစ်သည်။ သို့သော် အပေးအယူမျှတအောင်ချစ်ဖို့ကျတော့
မတတ်ဖြစ်နေသည်။ ဒီတော့ အချစ်ခံရတဲ့ တစ်ဘက်လူမှာအခက်အခဲဖြစ်စေတော့သည်။
ဒါ့ကြောင့်လည်း ကိုယ်ကချစ်ပါလျှက် လက်တွဲဖေါ်မမြဲပဲ
တတိယအုပ်စုကျတော့ တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ သူတို့ကျတော့ ငယ်ရွယ်စဉ်မှာ
နှစ်အတော်ကြာမှ၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဖူးစာမဖက်နိုင်ပဲ
လမ်းခွဲခဲ့ကြရသည်။ လက်ရှိအသက်အရွယ်၊ အလုပ်အကိုင် နှင့်
ပတ်ဝန်းကျင်အနေအထားအရ နောက်တစ်ယောက်တွေ့ဖို့ရာ သိပ်မလွယ်တော့။ ဒီလိုနဲ့
တစ်ချို့ကတော့ မိသားစုအရေးတွေရှိလို့၊ မိဘ လုပ်ကျွေးနေလို့၊
အပူမရှာချင်လို့၊ အချိန်မတန်သေးလို့ စသည်ဖြင့် အကြောင်းပြချက်ပေးကြသည်။
သို့ပေမယ့် လောကီကို စိတ်ကုန်သွားတာ မဟုတ်သ၍တော့၊ ပြောခဲ့တဲ့ အမျိုးအစား
၃ မျိုးနဲ့တော့ တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်း ဆက်စပ်နေသည်ချည်းသာဖြစ်တော့ သတည်း..။
ဟိုင်းလပ် တွေမှာ အသက်အရွယ်ရလာသည်နဲ့အမျှ သူ့အလိုလိုတွေ့ကြုံလာရတတ်သော
မပြောင်းလဲပဲကျန်ရက်ခဲ့ကြသူတို့ ကြုံတွေ့ရတတ်သော သဘောသဘာဝပင်ဖြစ်တော့သည်။
အပေါင်းအသင်းတွေမှာ အိမ်ထောင်ရက်သားကျကုန်ကြပြီ။ မိသားစုဘဝထဲမှာ
ကြိုးစား၊ ရုန်းကန်၊ လှုပ်ရှားနေကြရပြီ။ သူတို့ရဲ့အားလဒ်ချိန်တွေဆိုတာလဲ
မိသားစုအတွက်သာဖြစ်တော့သည်။ ဒီလိုအချိန်မှာ ဟိုင်းလပ်တွေအတွက်
သူတို့သဘောလိုက်မပေါင်းနိုင်လို့ကတော့ ဒီလူပျိုကြီးဟာ အင်မတန်ဂွကျတယ်။
ဒါကြောင့် လူပျိုကြီးဖြစ်နေတာ ဆိုတာမျိုး။ ဒီအပျိုကြီးဟာ အလွန်
ဇီဇာကြောင်တယ်၊ ဒါ့ကြောင့်လဲ ယောင်္ကျားမရတာ ဆိုတာမျိုး
မှတ်ချက်တွေနဲ့တွေ့ပြီသာမှတ်ပေရော့။ အစကတည်းက တသီးပုဂ္ဂလနေတတ်သူတွေအတွက်
မထောင်းသာလှပေမယ့်၊ အဖေါ်နဲ့ အပေါင်းနဲ့
ပျော်ပျော်ကြီးနေတတ်သူတွေအတွက်ကြတော့ သိသိသာသာဖြစ်လာကြတော့သည်။ ဒါ့အပြင်
ဟိုင်းလပ်တွေမှာက သူတို့ရှာတဲ့ဝင်ငွေကို တစ်ကိုယ်ရေတစ်ကာယ
မပိုလျှံသည့်တိုင်အောင် လောက်လောက်ငငတော့ရှိနေတတ်ကြသည်။ ဒီတော့
ဟိုအိမ်ထောင်ရှင်တွေလို ရုန်းရ ကန်ရ လည်းမရှိလေတော့ အတော်ကလေးကို
အားကြပြန်တယ်။ အဲဒီမှာပဲ သူများတွေအတွက်ရှာပါးပစ္စည်းဖြစ်တဲ့
အားလဒ်ချိန်လေးတွေဟာ ဟိုင်းလပ်တွေရဲ့ဘဝထဲမှာတော့ အထီးကျန် ငြီးငွေ့စရာ
အချိန်တွေအဖြစ်နဲ့ ပေါပေါများများရှိနေတတ်ကြပြန်ပါရောလေ။ ကြာတော့လည်း
ဟိုင်းလပ်တွေမှာ ကွန်ပြူတာက အခန်းဖေါ်၊ အင်တာနက်က သူငယ်ချင်း၊
ဖေ့စ်ဘုတ်ခ်က မိတ်ဆွေ၊ ဂျီတော့က စကားဝိုင်း ဖြစ်လာကြတော့တာမဆန်းဘူးပေါ့။
ဟိုင်းလပ်တွေမှာ နောက်ထပ်တွေ့ရ၊ ကြုံရတဲ့ ကသိကအောက်ဖြစ်စရာကိစ္စတစ်ခုက
ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေရဲ့ အလကားမတ်တင်း ပေးတတ်ကြတဲ့ အကြံပြု မေးခွန်းတွေပါပဲ။
နောက်ကျနေပြီနော်၊ မတွေ့သေးဘူးလား၊ ဆိုတဲ့
နောက်တောက်တောက်ပုံစံကတစ်မျိုး။ ကိုယ့်အသက် ၅၀မှာ သား၊သမီးအသက်က
၁၈ကျော်နေမှနော်..၊ မဟုတ်ရင်တော၊့ ဆိုတဲ့ နည်းပညာပိုင်းဆန်ဆန်
သုံးသပ်ချက်တွေက တစ်ဖုံ။ အသက်ကြီးလာရင် ဆေးပေးမီးယူ၊
ဘုရားသွားကျောင်းတက်လေးတော့ရှိမှဟ၊ တစ်ယောက်ထဲဆို တုံးလုံးလဲတော့ မခက်လား
ဆိုတဲ့ ဂရုဏာသဘောလေးက တစ်ဘာသာ၊ ကြားရတတ်စမြဲပင်။ ဒီလိုစကားလုံးတွေကို
နားမလည်တာ၊ လက်မခံနိုင်တာ မဟုတ်ကြပေမယ့်၊ ဟိုင်းလပ်တွေမှာလည်း
ပြန်ပြောစရာစကားကမဲ့နေတတ်ကြစမြဲ။ မချိသွားလေးဖြဲပြီး အဟင်း..ဟင်း…
ပရိုမိုးရှင်းချပြီးတော့ကို အမြန်ရှာနေတာ၊ နောက်နှစ်မှမတွေ့သေးရင်တော့
ရတာပဲပေါ့လေ၊ ဖေ့စ်ဘုတ်မှာတော့ ဓါတ်ပုံတွေ ဝေဝေဆာဆာနဲ့ကိုရှာနေတာပါပဲ၊
စသည်ဖြင့် ပြန်ဖြေရအောင်လည်း အခက်မဟုတ်လား..။
ဒီကြားထဲ တစ်ချို့အိမ်ထောင်ရှင်တွေကလုပ်လာတတ်ကြသေးတယ်။ အိမ်ရှင်မတွေလုပ်ပုံကြည့်။
“တစ်နေ့ တစ်နေ့ ရုံးကပြန်ရင် ချက်ရ ပြုတ်ရ လျှော်ဖွတ်ရ၊ အိမ်ရှင်းရ၊
အိမ်ကလူ မနက်ရုံးအမှီဟင်းလေးပြန်နွေးရ၊ ကလေးကတစ်ဖက်နဲ့ မလွယ်ပါဘူးကွယ်..။
ငါ့သူငယ်ချင်းပဲအေးပါတယ်၊ တစ်ကိုယ်တည်း အပျိုကြီး၊ အပူအပင်ကင်းတယ်….။”
ဆိုတာမျိုးတွေလာပြောတတ်တာ။ ဟိုင်းလပ် သူငယ်ချင်းရဲ့ဘဝကိုပဲ
သူကပဲပြန်အားကျနေသယောင်ပါးစပ်ကပြောပေမယ့်လို့၊ ချိုးလာတဲ့ အချိုးက၊
အဲဒီလိုဒုက္ခလေးတွေကိုက သာယာဖို့ကောင်းနေတာ အပျိုကြီးရဲ့၊ ညည်းလဲ
ကြိုးစားဦး လို့ပြောချင်မှန်းကသိသာနေရော။ အဲသလိုပင်ပမ်းတာလေးကိုမှ
ယောင်္ကျားနားကပ်ပြောလိုက်ရရင် သုခတွေကိုဝေလို့… ဒါတွေညည်းမသိပါဘူးအေ…
ဆိုတဲ့ အထာမျိုးကလည်း ကိုင်ထားတတ်သေးတာ။
“မိန်းမယူထားတာ ဒီတစ်ခုတော့ကောင်းတယ်ကွ၊ စားချိန်သောက်ချိန်မှန်တယ်၊
စားရသောက်ရတာလည်း အဆင်ပြေတယ်လေ။ အဝတ်အစားဆိုလဲ သူထုတ်ပေးထားတာ
ဝတ်လိုက်တာရုံပဲ။ အိမ်ခန်းလေးလည်း သပ်သပ်ရပ်ရပ်၊
ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲတုန်းကတော့ ရှုပ်ပွနေတာကိုး…” ဆိုတာမျိုးတွေလုပ်လာတတ်တာ။
“မင်းရော၊ မရှာသေးဘူးလား။ တစ်ယောက်တည်းပဲ နေတော့မှာလား”
ဆိုတာလေးတွေကပါလာတတ်ပြန်ရော။ တစ်ခုတော့ ကောင်းတယ်ကွ ဆိုပြီး
ဟိုင်းလပ်မောင်မောင်မှာ ပြန်ပြောဖို့တောင့် အခွင့်ကမရ။
အနောက်တိုင်းမှာဆို အသက် ၄၀ ကျော်လာတဲ့ ယောင်္ကျားလူပျိုတွေဟာ မေးခွန်း
၃ခုကို တစ်ခုပြီးတစ်ခု ဆက်တိုက်မေးတာခံရတတ်သတဲ့။ ပထမက How old are you?
ပေါ့။ ဖြေတဲ့သူက ၄၀ ကျော်နေကြောင်းဖြေမိတယ်ဆိုရင်ပဲ Are you married?
ဆိုတဲ့ ဒုတိယမေးခွန်းက ကပ်ပါလာတတ်သတဲ့။ အဲဒီမှာများ No, not yet.
လို့ဖြေမိရင်တော့ နောက်ဆုံးမေခွန်းကြီးကို ကြုံရပါတော့သတဲ့။ အဲဒါကတော့
Are you gay? ဆိုပဲ..။
ဒီလိုနဲ့ ကြာလာတော့ ဟိုင်းလပ်တွေဟာ လူ့ဘဝမှာ လုပ်ရမယ့် တာဝန်တစ်ခုကို
လုပ်နိုင်စွမ်းမရှိလို့၊ မလုပ်ဝံ့လို့ ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့
ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့လွမ်းမိုးမှုကြောင့် ငါများ တစ်ခု၊
အမှန်တော့ ဟိုင်းလပ်တွေ သေသေချာချာမတွေးကြည့်လို့ပါ။ နေတတ်ရင်
ကျေနပ်စရာတောင်ကောင်းနေသေးတယ်ဆိုတာ မမြင်မိသေးတာပါ။ ဟုတ်တယ်လေ၊
လူ့ဘဝမှာလူရယ်လို့ဖြစ်လာရင် အိမ်ထောင်သားမွေး ကိစ္စကို
အဲဒီအိမ်ထောင်သားမွေးကိစ္စတွေထဲမှာ ကြည်နူးမှု၊ ပျော်ရွှင်မှု၊
အသိုက်အမြုံရဲ့နွေးထွေးမှု ဆိုတဲ့မက်လုံးတွေကိုပေးထားပါတယ်။ ဒီတာဝန်တွေကို
မထမ်းဆောင်သူတွေအတွက်တော့ အဲသည်မက်လုံးတွေမရနိုင်တာတော့ အသေအချာပေါ့လေ။
ဒါပေမယ့်၊ ဒီတာဝန်ဆိုတာကလည်း စမိရင် ဆုံးတယ်မှမရှိပဲကိုး..။
သားသမီးလူလားမြောက်လို့ ပြီးမယ်မထင်နဲ့ဦး၊ မြေးလေးတွေ ထိမ်းရဦးမှာ။
ပြတ်အောင်ဖြတ်မယ်ဆိုတော့ လွယ်သလား။ ဘယ်မှာလဲ ဘဝရဲ့နေဝင်ချိန်အတွက်
ပြင်ဆင်ဖို့၊ သံသရာခရီးအတွက်ရော အချိန်ပေးနိုင်ပါ့မလား..။ တာဝန်တွေက
စခဲ့ပြီကိုး။ ဒုတိယ အရွယ်ကတည်းက စခဲ့လိုက်တာ၊ ကိုယ့်မိဘ
တွေပြန်ကြည့်ဖို့တောင်ခပ်ခက်ခက်မဟုတ်လား။ စိတ်ကတော့ရှိပါရဲ့၊ သို့ပေမယ့်
အမေတို့က ဘုရားဖူးမသွားရလဲ အိမ်ကဘုရားဖူးလို့ရတာပဲ။ ကလေးတွေ
ကျောင်းစရိတ်က မရှိမဖြစ်မဟုတ်လား။ အဖေ့က၊ ကိုယ့်အင်္ကျီတစ်ပါတ်နွမ်းလေးတွေ
ဝတ်ရပါတယ်။ အဖေတို့ကဘယ်များသွားစရာရှိတာမှတ်လို့။ မိန်းမက မိန်းမ
ဆိုတော့ဝတ်ချင်စားချင်မှာ၊ ဝယ်ပေါ့ကွာ..။ ကလေးတွေ လူတစ်လုံး၊
သူတစ်လုံးဖြစ်ဖို့ဆိုတာလည်း ခုခေါတ်မှာရှာနိုင်ပါမှ။ သားသမီးတွေ
စောစောအရွယ်ရောက်တော့ လည်း၊ မြေးကလေးတွေကသံယောဇဉ်တွယ်ရပြန်တယ်။ သူတို့က
ကလေးမွေးဖူးတာမဟုတ်တော့ အဖွားလုပ်သူကပဲ အစစအရာရာပေါ့
ဆိုတာမျိုးဖြစ်ပြန်ရော။ အဲ…. ဟိုင်းလပ်ဖြစ်ရတာ
နှစ်တွေနည်းနည်းကြာလာတော့မှ၊ ကံကောင်းတယ်ဆိုမလား၊ ကံဆိုးတယ်ဆိုမလား၊
ထမ်းရမယ့်တာဝန်ကြီးက ပခုံးပေါ်ရောက်လာပြီ။ ကိုယ်ကအသက်ကလေးရလာပေမယ့်
ကလေးတွေကငယ်နေသေးတော့၊ သေသွားမှာတောင် သူများထက်ပူရပင်ရပြန်ရော။
ဟိုင်းလပ်ဘဝ ကြာကြာနေခဲ့စဉ်က မိဘကိုပြန်ကြည့်နိုင်ခဲ့ပြီပဲထား၊ သူ့ခမျာ
အသက်ရလာမှ သားစာ၊ သမီးစာရှာရဖွေရ၊ ရုန်းကန်ရနဲ့ သေဖို့တောင် မတွေးရဲ။
အသေတတ်ဖို့၊ ပြင်ဆင်ဖို့၊ သံသရာအတွက်စဉ်းစားဖို့…အင်း… ဝေးပါတယ်လေ။
ဒီတော့ ဒီတာဝန်တွေဟာ လုံးဝမယူပဲ နေလို့ရပါသလား။ ရပါသေးတယ်။ နောက်ကျမှသာ
ကောက်ခါငင်ကာ မယူမိဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီတာဝန်တွေ မယူရင်တော့
သူနဲ့တွဲလာတတ်တဲ့ သာယာမှု၊ ကြည်နူးမှု ဆိုတဲ့
မက်လုံးတွေတော့မရတာအသေအချာပေါ့လေ။ အဲဒီတာဝန်တွေနဲ့ လုံးချာလည်လိုက်နေတဲ့
အိမ်ထောင့်ရှင်တွေက ဒါကိုမြင်ချင်မှမြင်နိုင်ပေမယ့် ဟိုင်းလပ်တွေကတော့
မြင်အောင်ကြည့်သင့်တယ်နော်။ အထူးသဖြင့် ကိုယ်က နောက်ကျမှစမယ်
စိတ်ကူးနေရင်ပေါ့လေ။ ဒီတာဝန်တွေကို မယူပဲ ဒို့ကတော့
မနေနိုင်ပေါင်ဟေ့..ဆိုရင်တော့ အမြန်သာ စ ကြပေတော့။ ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့သာ
စတင်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြပေတော့။ အဲ… သိပ်နောက်ကျသွားရင်တော့၊
အဲသည်တာဝန်တွေမယူတော့ ဘာတွေ ဆိုးကြိုးရှိနိုင်ပါသလဲ။ ရှိပါတယ်။
ဒုတိယအရွယ်မှာ အထီးကျန်ဆန်နေပါ့မယ်။ ဒါကတော့ ရှောင်လွှဲလို့မရပါဘူး။
ဒါပေမယ့် အဲသည်အရွယ်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ အားလဒ်ချိန်တွေကို
အထီးကျန်အချိန်တွေအဖြစ်ကုန်လွန်စေမလား။ ဒါတော့မဖြစ်သေသင့်ပါဘူး။ ဒီတော့ကာ
ပတ်ဝန်းကျင်အကျိုးရှိအောင် တစ်ခုခုလုပ်မလား။ ဘဝနေဝင်ချိန်ကို
ကောင်းနေပြီနော်။ ဟိုသူတွေမှာ ဒီလိုရွေးချယ်ခွင့်တွေမရှိဘူးရယ်။
ကိုယ့်မှာက ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်။ တတိယအရွယ်ရောက်ပြီဆိုပါတော့။ သေချာတယ်၊
ဆေးပေးမီးယူ မရှိပါဘူး။ ဘုရားသွားကျောင်တက် တစ်ယောက်တည်းပါပဲ။
ဘာဖြစ်သေးလဲ။ ကိုယ်က ဆေးကို ကိုယ့်ဖာသာယူနိုင်အောင်စီစဉ်
ပြင်ဆင်ထားပြီးပြီမဟုတ်လား။ ဘုရားသွားတော့ရော တစ်ယောက်ထဲဆိုပိုတောင်
ပြတ်သေးတယ်။ တောတောင်ထွက်ဖို့မလိုဘူး။ တောထွက်တယ်ဆိုတာ
နောက်ကလိုက်မဲ့သူတွေရှိလို့ ဖြတ်ရတဲ့သဘောပဲ။ ကိုယ့်မှာက
ဖြတ်စရာအထွေအထူးမရှိလေတော့ မြို့ထဲနေရင်တောင် တောထွက်ပြီးသား။ ပြီးတော့
ဘဝနေဝင်ချိန်မှာ တစ်ယောက်တည်း အထီးကျန်တယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စက၊ အိမ်ထောင်ပြုတာ၊
မပြုတာ၊ သား၊သမီး ရှိတာ၊ မရှိတာနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်..။
ကိုယ့်ကံကြမ္မာနဲ့ပဲဆိုင်တယ်။ အိမ်ထောင်ဘက်က ကိုယ့်ထက်စောစော
လွန်ခဲ့ရင်လည်း၊ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းဖြစ်မှာပဲ။ သား၊သမီး ဆိုတာက
ခုခေါတ်မှာပိုတောင် အားမထားလောက်သေးတယ်။ ကလေးတွေ
အများကြီးပျိုးထောင်ခဲ့ပေမယ့် အသက်ကြီးမှ တစ်ယောက်တည်း တိုက်ခန်းလေးထဲမှာ
အိမ်ငှားတွေ အဖေါ်ပြုနေရရှာတဲ့ လူကြီးတွေ၊ စင်္ကာပူမှ ဒုနဲ့ဒေးနော်။ ကဲ…
ဒုတိယ အရွယ်မှာ ဟိုသူတွေကသာသယောင်ထင်ရပေမယ့်၊ တတိယအရွယ်မှာတော့ ဘယ်သူမှ
ဟိုင်းလပ်တွေကတောင်သာနေတာအမှန်ပဲမဟုတ်လား။ ကဲ.. နေဝင်ချိန်ရောက်ပါပြီတဲ့
ကိုယ့်မှာက ပူပင်ပြီးချန်ခဲ့ရမယ့်သူမရှိဘူး။ ရှာထားခဲ့တဲ့ဟာတွေ
သုံးမကုန်ရင် အကျိုးပြုလိုက်ဦး လိုအပ်နေသူတွေကို။ သေခါနီး ငိုသံမကြားရင်
ငြီမ်းငြီမ်းချမ်းချမ်းသေရတယ်မှတ်။ ကိုယ်ကသာ အဲဒီအချိန်အတွက်
ပြင်ဆင်ထားပြီးသားဆိုရင် သေရမှာကို ကြောက်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။
ဟိုတွေခမျာမှာတော့ အမွေတွေခွဲရ၊ မှာတမ်းတွေခြွေရ၊ ပြင်ပြင်ဆင်ဆင်လဲ
အချိန်က မပေးနိုင်ခဲ့ရင်တော့၊ တွေးသာကြည့်တော့။
လောကကြီးက တရားမျှတပါတယ်။ သူက အကောင်းနဲ့ အဆိုးဆိုတာကိုတွဲပေးနေကျပါ။
အိမ်ထောင့်ရှင်တွေရဲ့ဘဝမှာ ကောင်းတာတွေရှိသလို ဆိုးတာတွေရှိတယ်။
ဟိုင်းလပ်တွေမှာလဲ ဒီလိုပါပဲ။ ဒီတော့ကာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဘာများမှားနေသလဲ
မတွေးပါနဲ့၊ မမှားပါဘူး။ မှန်အောင်မြင်တတ်ဖို့ပဲလိုတာပါ။
တစ်ခုပဲသတိထားပါ။ ကိုယ့်အချိန်တွေကို အထီးကျန်အချိန်တွေအဖြစ်
မကုန်ဆုံးစေပါနဲ့။ ကိုယ်က အိမ်ထောင်သားမွေးတာဝန်ကို မယူထားတော့
ဒီနေရာမှာတော့ သူများထက်ပိုပြီးအားထုတ်ပြင်ဆင်ရပါလိမ့်မယ်။ ပြင်ဆင်ပါ။
တတိယအရွယ်အတွက်ပြင်ဆင်ပါ။ နေဝင်ချိန်အတွက် နားခိုရပြင်ဆင်ပါ။
မိဘတွေကိုတတ်နိုင်သလောက်ထောက်ပံ့ပါ။ ကိုယ့်ကြောင့် သူတို့
အိုဇာတာကောင်းသလို ကိုယ်လဲ ကောင်းပါလိမ့်မယ်။ အချိန်လွန်မှတော့
ယူမယ်ဆိုလဲ…။ ပြောခဲ့ပြီးတဲ့အတိုင်း မြန်မြန်လေးဆရာရေ့ပေါ့။ အဲ…
တာဝန်တွေလဲ မယူချင်၊ ပြင်ဆင်တာတွေလဲ ပေါ့လျော့နေတဲ့
ဟိုင်းလပ်ကြီးတွေကတော့ ဇတ်သိမ်းမလှနိုင်ဘူးထင်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်
မြင်တတ်၊ယူတတ်၊ ဖမ်းဆုပ်တတ်၊ အသုံးချတတ်ဖို့သာလိုပါတယ်ဆိုတဲ့
အကြောင်းပြောရင်း……….. ကျနော်လဲ.. ဟိုင်းလပ် ပါပဲဗျာ..။
Posted by ညချစ်သူ at 11:29 PM